Soosaarayaasha Kala-soocida -Shiinaha Kala-shaandhaynta Qaybaha Warshada & Alaabta
shaandhada saliidda gaarka ah ee aan lahayn birta ka samaysan shaandhada shaandhada
Warbaahintu sifayso walxaha Filter-ka-soo-baxa waa bir aan-ka-midab lahayn oo la dareemo iyo maro silig tolan oo bir-la'aan ah.
Shaandhaynta Dareeraha Warshadaha ee 304/316 Cunsurka Shaandhaynta Basket-Birta Aan-la-hayn
Shaandheeyayaasha kolayga waxay shaandheyn karaan dareereyaal kala duwan oo kala duwan si ay u haystaan ​​adkaha ugu badan ee cabbir kasta ah. Dhammaan filtarrada dambiisha way fududahay in la kala diro oo la nadiifiyo. Waxyaabaha shaandhaynta kolayga ee hal dhululubo, labajibbaaran labajibbaaran, dhululubo badan iyo naqshad laalaab ayaa lagu bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha codsiga.
Shaandhaynta birta aan fiicnayn ee shabagga ah ee giraanta giraanta ah (miiraha saxanka, baakadaha shaandhaynta, saxanka shaandhaynta mesh silig). Nooca Walxaha: Mesh birta ah, mesh naxaas ah, mesh naxaas ah, maro silig madow, mesh nikkel, mesh monel, mesh degdega ah, mesh inconel iwm SUS304 Saxannada Mesh birta ah ee aan birta lahayn ee leh cidhifyada ayaa si caan ah loo isticmaalaa shaashadda sifaynta warshadaha batroolka. Sifaynta Shaashada Fasalka aan-Aashida lahayn ee Mesh Discs waa baakado fidsan oo laga soo shaqeeyay 304, 304L ama 316 ss maro mesh ah oo leh aashito ka hortag ah oo aad u wanaagsan.
Shaashadda mesh-wareegga ee birta aan-dhalatada lahayn, shaashadaha wax-ka-baxa waxay shaandheeyaan xirmo mesh ah
Banaan, twill, bannaan Nederlaan ah, twill Nederlaand ah, rogaal Holland ah, shan bogsasho. Ama saxan khafiif ah oo lakabyo badan leh oo ka kooban mesh-kan SS.
Shaashada shaandhada birta ah ee birta aan-la-hayn 304/316
Mesh bir ah oo isku dhafan oo badan waa nooc cusub oo shaandho ah oo leh awood farsamo sare leh iyo qaabdhismeed adag oo guud, kaas oo ka samaysan mesh bir ah oo badan oo la today iyada oo loo marayo xaddidaad gaar ah iyo hababka vacuum sintering.